किस्मती कथा- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
भाद्र २१, २०७६ मुनाराज शेर्मा
सखी’ ले पश्चिम तराईको कथा भन्छ  ।
‘मान्छे होइनन् यिनीहरू थारू हुन्,’ यो एक लाइन संवादमा, संस्कृतिले समृद्ध मिहिनेती सरल सोझो दमित थारूमाथि केन्द्रीय मानसिकताले हेर्ने दृष्टिकोणको उदाङ्गो चित्र जति बोल्छ, त्यत्ति कुनै उदारभन्दा उदार दस्तावेजले बोल्दैन । त्यसकारण ‘सखी’ मेरो प्रिय पुस्तक बन्यो ।
थारूहरू रैथाने हुन् । राज्यले बस्ती बसाउन थारूलाई मधेस आवाद गर्न लायो । त्यो पुस्तकले बोलेन । औलो र तमाम अभाव सब सहेर जिन्दगी बिताउने थारूहरू निमुखा छन् । टाठाबाठाले जालसाजी गरी जग्गा हडप्छन् । पछि तिनीहरूकै कमैया बस्नुपर्ने दुःखको असाध्य छायाले छोड्दैन उनीहरूलाई । मध्ययुगीन दासजस्तो जिन्दगी बाँचिरहेका छ्न् । उनीहरूको आफ्नै मौलिक संस्कृति छ । मानव निरुद्देश्य भौतारिरहँदा नसोचिकनै घर लान,े पढ्न बस्न दिने थारूहरू हृदयका महान् छन् । दुःखलाई फूलजस्तो प्रेम गर्ने थारूहरूको करुणामय जीवनचर्याको फेहरिस्त बताउने प्रयास गरेको छ ‘सखी’ ले ।
प्रेमलाई केन्द्रमा राखेर कमैया आन्दोलन र आंशिक रूपमा माओवादी जनयुद्धको असरलाई समेत पुस्तकले परिधीय वृत्तमा भन्ने प्रयास गरेको छ । सामन्तहरू जनयुद्धमा मारिएका र उनीहरूको अवशेष नामेट भएपछिको समाजको घटनाक्रम घतलाग्दो छ । गाउँमा फूल कुल्चँदै हिँड्ने सामन्तहरू कसरी मन्दिरमा फूल बेच्ने भए ? जीवनको ग्राफ यति ओरालो कसरी झर्छ ? जब मानिसहरू समाजको गतिलाई रोक्न दुस्प्रयास गर्छन् तब जीवनको ग्राफमा उल्टो झुन्डिन्छन् सायद ।
कमैया आन्दोलन, मध्यपश्चिम तराईमा रहेको, मध्ययुगीन दास प्रथाजस्तो लाग्ने कमैया कमलरीजस्ता प्रथाहरूको दुःखको नदीलाई कमैया आन्दोलनले बाढीमा परिणत गरिदिएको छ । गाउँमा खेत बाँझो छ । कमैयाहरू मुक्तिको मार्गमा आवाज लिएर ओर्लिएका छन् । भोकै बसे पनि सामन्तको पाउ मोल्न नफर्कने वैचारिक दृढता निमुखाहरूमा पलाएको छ । मुक्त त भए तर बेरोजगार भए । एउटा संक्रमणबीच आन्दोलन किनारा नलागी शिथिल बन्छ । दुःखका नदीहरू फेरि अभावसँग बग्न थाल्छ ।
भर्जिन बाल्य जीवनको प्रस्तुति मानव र किस्मतीले आफ्ना बालसखाहरूसँग बिताएका कुमारी समयको असम्पादित घटनाले पाठकलाई लौकिक बाल्य स्वतन्त्रताको सौदर्य रसपान गराउँछ ! जुन काँचो र पूर्ण छ । हामी भनिदिन्छौं— बच्चाहरू अबोध निश्चल अञ्जान निष्पाप निश्कलंक हुन्छन् । त्यो परिभाषामाथि पुस्तकले प्रश्न गरेको छ । र, भनेको छ बच्चाहरू हामीले भनेजस्तो हुँदैनन् । उनीहरूको बेग्लै समाज हुन्छ जो छुट्टै कानुनमा चल्छ । त्यो समाज वयस्क समाजको विरुद्धमा वा सापेक्षमा भूमिगत वा छाया हुन्छ ! उनीहरू भयंकर जोखिम मोल्न पनि हिच्किचाउँदैनन् । तुरुन्त निर्णय लिन्छन् । ‘फिरफिरे’ मा बुद्धिसागरले पनि यो भूमिगत विद्रोही बाल समाजको गजब उठान गरेका छन् ।
भूमिपतिका बच्चाहरू विद्यालय जान्छन् । किस्मती स्कुलअघिको झाडीबाट विद्यालय हेरेर फर्कन्छे । मानवलाई स्कुलसम्म पछ्याएर हेरेबापत उसको पुस्तालाई बिरामी बनाउने गाली पाउँछे, पढ्ने अधिकारको कुरै छोडौं । एउटै मात्र कारण ऊ थारूकी छोरी हो र कमलरी बस्न बेचिएकी छे । तथापि मानवको दयाले घरैमा पढ्छे । विचार सपना मन त्याग परिश्रम र भावनाले किस्मती कुनै अरू भूमिपतिकी छोरीभन्दा अब्बल छे । मानवलाई मनले माया गर्छे । विद्यालयमा गाउँको छोटे राजाले आफ्नी छोरीलाई घरैबाट ल्याएको सिंगल बेन्चमा एक्लै बस्ने गरी राखेको छ । समानताको केन्द्र विद्यालय यो कार्यले लज्जित छ । कहीँ नभएको सामन्त मधेसमा ।
मानव पहाडबाट झरेदेखि किस्मतीको अन्जान धागोले बाँधिन्छ । पहिलो पटक विद्यालय प्रवेश गरेपछि नै सामन्तको छोरी मालतीसँगको निस्कपट सम्बन्धको बीउ रोपिन्छ । त्यो सम्बन्ध झाँगिएर उप्काउनै नसकिने विशाल लहराले गाँजेपछि त्यसको परिणामस्वरूप ज्यान जोखिम भएपछि आधा रातमा सिद्धार्थले जस्तो बेपत्ता घर त्याग गर्छ । मानवले किन सिद्धार्थ हुने कोसिस गर्‍यो ? लेखकलाई पाठकले यहीँ प्रश्न गर्छ । धेरैले लेखकीय कमजोरी हो भन्न सक्छन् । यथार्थमा यो आंशिक सम्भव छ कारण यो बाल संसारको निर्णय हो । वयस्क समाजमा पनि यो घटेको छ ।
यही टर्निङ प्वाइन्टले कथालाई द्रुत रूपमा अगाडि धकेलेको छ । शंका गर्न सकिन्छ कमलरी र पहाडे बाहुनको विवाह गराउन चाहँदैन लेखक र उसको समाज । भोग्न भोगाउन मात्रै चाहन्छ । त्यस्तो शंकालाई ध्वस्त बनाउन मानवलाई जिन्दगीभर तड्पाएर कृष्णमा रूपान्तरण गर्छ र राधा खोज्न विवश बनाउँछ जसरी देवकोटा क्षत्रीलाई भोटेको पाउ ढोगाउँछन् तर बाहुनले यो पाउ छुन्छ भन्न सक्दैनन् । मानवको परिवार ध्वस्त हुन्छ तथापि मानवको पूर्ण पुनर्मिलन हुँदैन । यस्तो अदृश्य असहिष्णु शक्तिको कारक समाज हो या हाम्रो लेखकीय मानसिकता वा आख्यानको अनिवार्य तत्त्व ? वा पाठकीय मानसिकता जो दुःख, वियोग, पीडा, कष्ट, संघर्षको पराकाष्टा उपल्लो किनारदेखि खसाएर मात्र हाम्रो मन रमाउँछ । त्यस्तो दुसाध्य नकारात्मक आराधनालाई महान् भन्छौं । त्यसकारण पनि प्रगति राईको ‘मृत्युलाई बिर्सेको मान्छे’ सकारात्मक चिन्तनलाई समाजले अपहत्ते गरेर चर्चा गर्न सकेन । हामी शून्यबाट वा बिग ब्याङ थ्यौरीबाट निर्मित हौं या सूनबाट नबनेर खरानी र सुलीबाट बनेपछि श्रापित हामी फूलजस्तो फुलेकै होइनौं, तसर्थ दुःखको असीमित पीडाले मात्र छुन्छ हामीलाई । सायद लेखकले पाठकीय बायोलोजिकल अभिशप्त दुःखको निर्माण विन्दु थाहा पाएर वा आफूभित्रको त्यो तत्त्वलाई पस्केका हुन् । नायक बेठेगानका छन् ।
समाजको स्वघोषित परम्परित सम्बन्धहरूसँग नायक मित्रवत् छैन । नोम्याड जिन्दगी जिउन चाहन्छ । सम्बन्धहरूको ब्रेकअपभित्र आफ्नो भर्जिन स्वतन्त्रताको खोजीमा छ । संसारमा प्रेम मात्र ठूलो हो भन्ने नायक प्रेमबाटै अस्वीकृत निस्सार जिन्दगी बाँच्छ ।पुरुषत्वको अस्वीकृति झल्काउने ‘सखी’ मा किस्मतीले हन्डरहरूको बीचमा जीवनलाई होमेकी छन् । प्रेम मात्र मानवताको प्रेम हो । शरीर सुख प्रेमको अघि कमजोर छ । जीवनमा अति अपनत्व महसुस गरेको मान्छे पुरुषमा रूपान्तरित भएपछि प्रेम मुर्झाउँछ । प्रेम गरिरहन पुरुष चाहिँदैन उसको कल्पनाले मात्र पनि प्रेमलाई बचाउन सक्छ । ‘नथिया’ मा सामलीले प्रोफेसरलाई प्रेम गर्न नै उसलाई त्यागेको तथ्य किस्मतीले मानवलाई अस्वीकृत गरेर प्रेम गरिरहेको समान पुरुष अस्वीकृत चिन्तन ‘सखी’ मा देखिन्छ । किस्मती मानवलाई प्रेमचाहिँ गर्छे तर ग्रहण गर्दिन ।
स्थानीय भाषाको प्रयोगले नेपाली भाषालाई समृद्ध बनाएको छ । क्षेत्रगत कथ्य भाषाको प्रयोगले सीमान्त समुदायको प्रतिनिधित्व गरेको छ । केन्द्रीय सत्ता र अरू क्षेत्रलाई सीमान्तमा बेगल भाषा र संस्कृतिसँग थारूहरू बाँचेका छन् भन्ने जानकारी प्रदान गर्न ‘सखी’ जस्ता कृतिको योगदान अमूल्य छ । अतिशय भावुकताले प्रभावित नायक बाल्यावस्थामा छोडेर बिछोडिएको किस्मतीको सम्झनाले जीवनभर बिरामी हुन्छ । घर आफन्त बिरलै सम्झन्छ तर किस्मतीको यादले सिकिस्त नै हुन्छ । मालतीको प्रेममा रहिन्जेल किस्मती दोस्रो चाहना थियो । मालतीको लफडा सुरु भएपछि कसैलाई नभनी सुटुक्क भाग्नु अपत्यारिलो र अचम्मलाग्दो छ । मालती फूल बेच्दै भेटेर पनि ऊसँग मन नअडिनु थप आश्चर्य छ । आश्रममा जिन्दगीको सबै लोग्नेहरू भेला हुनु र खास प्रेमीलाई अस्वीकार गर्नु बढी फिल्मी प्रभाव र अस्वाभाविक लाग्न सक्छ । वास्तवमा पुरुषको अहम्लाई अस्वीकार र मानव प्रेमलाई मात्र अंगीकार ‘सखी’ को मूल उद्देश्य देखिन्छ ।